हाडमा जाडो बढे, तराइले सेक्नु पर्छ।
आँधी आए तराइमा,पहाडले छेक्नु पर्छ।
होइन भने देश भक्ती, छैन हाम्रो छातीभित्र।
माटोलाई चोट लाग्दा, मुटुहरु दुख्नुपर्छ।
पहाडी भेगमा जाडो बढ्दा तराई भेगले छेक्ने अनि तराईमा आधिहुरी आउँदा पहाडले छेक्ने नेपाल स्वभावैले मनकारी मानिसले भरिएको देश हो। सायद ! सर्जक दिनेश अधिकारीले यो कालजयी शब्द प्राकृतिक विपद र परिस्थितिको कल्पना गरेर नै लेखेका थिए। चैत्र १७ गते आइतबार साझको बेला बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीले ठुलो जनधनको क्षति भयो। सहयोगको लागि धेरै सहयोगी मन राहत बोकेर पुगे। घाउ लागेको मनमा केहि हदसम्म मलम लाग्यो।
यद्दपि समाचार संकलनको लागि पुगेको हाम्रो टिमले यस्तो दृश्य पनि देख्यो जुन दृश्य साच्चै नै हृदय विदारक थियो। हावाहुरीले उडाएको छाना, छारप्रस्ट सामान र रोइरहेका मानिसको माहोल खिचिरहदा राहत बाढ्न आएका एक व्यक्तिले ‘म राहत बाढ्न आएको हो मेरो फोटो खिच्नु न’ समेत् भन्न भ्याए। कस्तो बिडम्बना समाजसेवा त देखावटी पो हुन थालेछ। पिडितलाई केहि सामान दिए जसरी तस्विर खिचाउने अनि सामाजिक संजालमा पोस्टाउने क्षणभरको गोहिले आशु बगाए जस्तो। कठै कत्ति सानो सोच र मानसिकता भएका मानिस पनि हुन्छन् समाजमा।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार फेटा गाँउपालिका–१ भरवलियामा मात्रै हुरीले एक सय ३० घरमा पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याएको छ भने ६० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
आम सर्वसाधारण जो देखावटी कै लागि केहि राहत बोकेर त्यहाँको दुर्दशा आफ्नो मोबाइलमा क्याप्चर गरेर फर्किने त छदै नै छन्। यो कुनै नौलो र ठुलो कुरा रहेन अब हाम्रो समाजमा। ताज्जुबको कुरा त के छ भने जनप्रतिनिधि समेत् आशु बगेको ठाउँमा गएर झन् आँशु बगाउने काम गरिरहेका छन्। गुनासो सुनेर हल गर्नुको सट्टामा जनताको बिलौना एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने रहेछन्।
एक स्थानीयले हामीसँग बिलौना गरिन् ,नेता जीहरु आउनुभएको थियो, हामीले हाम्रो त गाँस, बाँस नै छिनियो त्रिपाल पनि पाएका छैनौ केहि पहल गरिदिनुस भन्दा नेता जीहरू नमस्कार गर्दै हासेर हिडीदिनु भयो।’ जनताको समस्या हल गर्नुकोसट्टा ङ्गिच्च दात देखाएर यथास्थानबाट सुनेको पनि नसुने झैँ गरि हिड्नु कति सम्मको मानवता हो।
भारतबाटसम्म नेताहरु अवलोकनका लागि सफा चिल्लो गाडीमा घ्याच्च ब्रेक लगाएर ओर्लिएको दृश्य भिडियोमा देख्न सकिन्छ । लाल किल्लाको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरु वैचारिक रुपमा रङ खुइलिएका थोत्रा खेलौनाजस्ता भए तर उनीहरुको गाला, अनुहार र शरीर भने रातो, चिल्लो र खान्दानी बनाउदै क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा अवलोकन गरे। बस अबलोकन मात्रै गरे।
पिडितको भने चड्केको तालु, लल्याक्लुलुक हात-गोडा, हिलाम्मे ढाड, र भोकले बटारिएको पेट भुइँमा बजारिएको थियो। सपना खोसिएका आँखा चिम्म गरेर अँध्यारो मन छाम्दै लामो श्वास फेर्दै केहि राहतको आहत पाउने आशमा भाषणमा कान थाप्छन् उनीहरु। बिडम्बना आश्वाशनका केहि शब्दमा नै सिमित हुन्छन् नेताको भाषण। जनताको दुख पसिना र जर्जर अवस्था विर्सेर आफ्नै सिमित स्वार्थमै अड्किन्छ उनीहरुको भाषण।
क्षतिग्रस्त स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखि प्रचण्ड पुष्प कमल दाहाल लगायत राजेन्द्र महतो समेत् पुगे। फेटा जहाँ धेरै क्षति भएको छ त्यस स्थानमा प्रधानमन्त्रिले हेलिकप्टर चडेर अवलोकन गरेकोमा स्थानीयको गुनासो छ।
जनप्रतिनिधिहरु सवार भएर गएका गाडीले गाउँको बाटो नै जाम भयो। त्यहाको स्थिति नै अस्तव्यस्त भयो। जुन रुपले सडक जनप्रतिनिधिको चिल्ला गाडीले भारी त्यो रुपमा पिडितको घरमा राहतले भरिन सकेन।
राहत बाँड्न गाउँमा आउनेले सडक छेउछाउका प्रभावितलाई दिँदै हिँडेकाले भित्री गाउँ र टोलका पीडित छुटेका छन्। हुरीले भरवलीया गाउँका सडक छेउछाउकाभन्दा भित्री टोलमा बढी क्षति पुर्याएको छ। राहत बाड्ने गाडी गाउँमा छिर्न नपाउँँदै बाटोमा घर भत्किएकाहरुले तछाडमछाड गरेर लाने गरेको पिडितपक्षको गुनासो छ।
पीडितलाई चिउरा, भुजा, चाउचाउ, विस्कुट, फ्रुटीलगायतका खाद्यान्न बोकेर पर्सा र बाराका मात्र नभइ देशका विभिन्न जिल्लाबाट दाता घटनास्थलमा पुगेका छन्। राहत वितरण गर्न पुगेकाले घर भत्किएका परिवारका लागि त्रिपाल, म्याट, झुल र जस्तापाता वितरण गरिरहेका छन्। यद्यपी रातह वितरण व्यवस्थित नहुँदा कतिपय पीडित राहतबाट बन्चित भएका हुन्। एकद्वार प्रणाली अपनाएर राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउन सके असली पीडितले साच्चै राहत पाउने थिए।
सुवर्ण गाउँपालिका–४, हर्दिया गाउँ बारा सदरमुकाम कलैयाबाट १३ किलोमिटर टाढा छ। तर आइतबार रातिको हावाहुरीसँगै भग्नावशेषमा परिणत हर्दियाको दलित बस्तीलाई अझै उद्धार र राहतले छुन सकेको छैन। तीन रात खुल्ला आकाशमुनि विताएका स्थानीयले बुधबारसम्म नगरपालिकाले चलाएको मेस (सामूहिक भोजन) मा बिहान–बेलुकाको खानाबाहेक केही पाएका छैनन् भने अवस्था बुझ्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि त्यहाँ पुगेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालसहितका शीर्ष नेताहरू बार-पर्साको प्रभावित क्षेत्र निरीक्षणमा आउन–जाने क्रम चलिरहेको छ। हावाहुरीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित फेटा गाउँमा सबैको ध्यान केन्द्रित भए पनि हर्दियाका पीडितप्रति सरोकारवाला कुनै पक्षको पनि ध्यान पुगेको छैन।
नेताको भन्दा कम थिएन बरु ! उस्तै हाल थियो घर परिवार सुरक्षित भएका स्थानीय छरछिमेकिको पनि। बारा र पर्साका सबै घर तितरबितर भएका छैनन्। जति घरका छाना छैनन्, जसजसले आफन्त गुमाएका थिए उनीहरु दुखित मुद्रामा देखिन्थे। बाँकी स्थानीय जसको घर परिवार सुरक्षित थियो सबैको हातहातमा मोबाइल थियो। उनीहरु मोबाइल तेर्साएर आफ्नै छिमेकीको दुर्दशा खिचिरहेका थिए मानौ उनीहरु कुनै वास्तविक चलचित्र खिचिरहेका छन्।
बरु नेपाली सेनालाई भ्याईनभ्याई परेको छ। पिडितलाई उद्दार गर्न, भत्किएको घरबाट सामान निकालिदिन, टेन्ट हालिदिन उनीहरु अहोरात्र खटिएका छन्। सलाम छ ! यी पौरखी हातहरुलाई जसले निस्वार्थ सेवा गरिरहेका छन्। हृदयबाट नै असल कार्य गरिरहेका छन्।
निश्वार्थ भावनाले समाजसेवा गर्नेलाई हामीले खुट्टा तानेको जस्तो लाग्ला। यद्दपी हाम्रो मनसाय भने त्यस्तो होइन। देखावटीपन त्यागेर साच्चै मनबाट लाग्न सावधान गराउन चाहेका मात्र हौ। असल कार्यले मन जोडिन्छ। कर्म जोडिन्छ। अनि देश जोडिन्छ।